संसदको निष्प्रभावी भूमिकाले मदनअमात्यलाई गाह्रो
चार वर्षमा संसदमा कहिल्यै बोलेनन मदन अमात्यले । भूमिकाविहिन नेताभन्दा प्रभावशाली नेतृ पम्फा भुषाललाई जिताउने मतदाताको मन ।
ललितपुर । ललितपुरको मुटु लगनखेलबाट करिव १५ –२० मिनेटको यात्रामा पुगिन्छ,– सुनाकोठी गाउँ । त्यहीं भन्दा अगाडि जाने हो भने अर्काे बजारमा पुगिन्छ चापागाउँ । अहिले त्यहाका मतदातालाई चुनावले धपक्कै छोपेको छ ।
अघिपछि आफनै घर करेसमा ब्यस्त हुने त्यहाँका मतदाता अबको चार दिनपछि आफनो अमूल्य मत कसलाई दिने भन्ने घर सल्लाहमा देखिन्छन् । साँझ–विहान चियापसल र चोकहरुमा आफनो क्षेत्रमा उम्मेदवारका विगत, आगामी दिनमा खेल्न सक्ने भूमिका र उठाईएको एजेण्डादेखि कसका प्रचारशैली कस्तासम्मका विषयमा बहस हुन्छ ।
तर मतदिने बेलाभने उनीहरुले आफनो क्षेत्रको विकास, कला सँस्कृतिको जगेर्नादेखि राजनीतिक प्रभावसम्मको अब्बल देखिन सक्छन उनैलाई मतदानदिने तयारी गरेका छन् ।
यसपटक अलिक वढी यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्ना जनप्रतिनिधी संसददेखि सरकारसम्म प्रभावकारी हुन सक्ने गरी रोज्ने हो की ?’ ललितपुर महानगरपालिका २१ सुनाकोठीका अष्टवहादुर महर्जनले कुराकानीका क्रममा भनेँ संसदमा पुगेर प्रभाव देखाउन सक्नेलाई अब रोज्नुपर्छ ।’
ललितपुर क्षेत्र नम्वर ३ मा पर्ने यस क्षेत्रमा वामगठवन्धनका तर्फवाट माओवादी केन्द्रकी प्रभावशाली नेतृ पम्फा भुसाल र कांग्रेसका जिल्ला सभापति मदनवहादुर अमात्य चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । ०६४ मा भुसााल यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित थिइन् भने ०७० मा भुसाल चुनाव नलडेपछि अमात्य निर्वाचित भएका थिए ।
०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा मतदाताले काग्रेसका उम्मेदवार अमात्यलाई जिताए पनि उनले संसदमा खेलेको भूमिका भने निष्प्रभावी देखिएको गुनासो मतदाताको छ ।
त्यहाँका मतदातालाई अमात्यले चार वर्षको वीचमा संसदमा पुगेर खेलेको भूमिका भने मन परेको रहेनछ । मन परोस पनि कसरी ? अमात्यले चार वर्षको यो अवधीमा संसदमा कहिल्यै बोलनन् । संसदमा पुग्न हाजिरी गर्ने र फर्कने बाहेक उनको संविधान निर्माण र जनताका एजेण्डा संसदमा ध्यानाकर्षण गराउने तिर कहिल्यै मन लगाएनन् ।
अमात्यले आफुले संसदमा समय लिएर बोलेको कुनै रकेर्ड संसद सचिवालयमा देखिदैन । मदनको संसदीय भूमिका कमजोर देखियो । कोइलाछीगुठी खोकानामा मतदान गर्ने तयारीमा रहेका ललितपुर २१ कै आशाकाजी डंगोलले भने, –‘संसदमापुगेर जनप्रतिनिधीले जनताका कुरा जहिल्यै वोल्न अग्रसर हुनखोज्नुपर्छ । मदन यसमा चुकेका छन् ।’
ललितपुर ३ का मतदातालाई आफना जनप्रतिनिधी कस्तो रोज्ने ? ठम्याउन त्यत्ति गाहो छैन । दुवै नेता यस क्षेत्रका मतदाताका बीचका टेष्टेट नै हुन । ‘हाम्रालागि पम्फा र मदन दुवै चिरपरिचित अुनहार नै हुन्,’ अष्टबहादुर महर्जनले उम्मेदवार छान्दा अव मतदाताले पु¥याउनु पर्ने विवेकको प्रसंग उठाउँदै भने, अव राजनीतिभन्दा विकास र समृद्धितिर मुलुक जाने नेताहरुको भनाई देखिन्छ । त्यसो हो भने अब बन्ने सरकारमा कसको हुन सक्छ सहभागिता ? कसले ल्याउन सक्छ, प्रभावकारी योजना ? उसैलाई जिताउँदा क्षेत्रका लागि राम्रो हुन्छ ।’
राजनीतिअहिले गोलचक्करमा छैन । संविधाननिर्माण भएपछि नेताहरुले अवआर्थिक विकास र समृद्धितिर मुलुकलाई अगाडि बढाउने नारा चुनावी प्रचारका क्रममा दिएका छन् । त्यसका लागि स्थिर सरकारको आवश्यकता पर्ने नेताहरु भाषण नै गर्छन् ।
जनतालाई पनि एकपटक कम्तीमा ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार भएको हेर्न मन छ । हाम्रो चाहाना पनि देशमा स्थिर सरकार होस, ५ वर्ष एउटै नेतृत्वले सरकार चलाएर विकासमा मात्र ध्यान केन्द्रीत गरोस भन्ने छ,’ चापाफल महादेवस्थानकी मन्जु महर्जन भन्छिन्, – ‘यसपटक त्यो अवसरको सदुपयोग जनताले गर्न सक्नुपर्छ ।’
४३ वर्षीय महर्जन संसद र सरकारको भूमिकामा प्रभाव मदनको तुलनामा पम्फाले राख्न सक्ने वताउँछिन् । ‘उनी (पम्फा) प्रभावशाली पनि छिन, पार्टी र केन्द्रीय राजनीतिमा पनि, मदनको तुलनामा । सरकारमा सहभागिताको हिसावले पनि पम्फाको सम्भावना वलियै देखिन्छ,’ मन्जु खुलिन्– ‘सरकार निर्माणका दृष्टिकोणले पनि कांग्रेसको भन्दा वामगठवन्धनकै बन्ने सम्भावना छ । त्यसरी हेर्दा त पम्फा उपयुक्त हुन् की ?’
तर गोदावरी १४ वाडेगाउँका तीर्थराज नेपाली राजनीतिलाई सरकार र सत्तासँगको अवसरको रुपमा मात्र बुझ्न नहुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारमा पुग्ने, संसदमा बोल्नेले मात्र हुन्न, क्षेत्रको जनतासँग कतिसँगै हुन्छन, प्रतिनिधी भनेर पनि हेर्न सक्नुपर्छ ।’
उनको यो तर्कमा भने प्रतिस्पर्धी दुवै उम्मेदवार अन्यत्रका भन्दा वढी नै सजग देखिएका छन् । काग्रेसका अमात्य पनि जनतालाई भने चिढ्याउन चाहँदैनन । पम्फा पनि आफनो क्षेत्रका जनताको गुनासो सम्वोधन गर्ने, जनतासँगै रमाउन चाहने नेतृमा पर्छिन् । ‘अप्ठायारा दुखसुखमा खोजेका वेला भने दुवै आईदिने, समस्या वुझिदिने खालकै छन्,’ गोदावरी १४ कै धनगोविन्द महर्जन भन्छन्, ‘त्यहीभएर मतदान कसलाई गर्ने टुंग्याउन मतदातालाई पनि अप्ठायारै छ ।’
भूगोलका आधारमा हेर्दा ललितपुर –३ मा गोदावरी न.पा. वडा नं. १२, १४ र ललितपुर महानगरपालिकाको १, २, ३, ४, ५, १०, १३, १४, १५, १८, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९ पर्छन् ।
गत स्थानीय चुनाव, वामपन्थीहरुको प्रभाव आदी÷इत्यादीको लेखाजोखा गर्दा कांग्रेसका अमात्य माओवादी केन्द्रकी भुषालभन्दा कमजोर देखिन्छन् । स्थानिय तहकै मात्र मतलाई आधार मान्दा यस क्षेत्रमा १२ हजार ४ सय ४४ मत वाम गठवन्धनको बढी देखिन्छ कांग्रेसको भन्दा ।
तर यसले मात्रै अहिलेको निर्वाचनको छिनोफानो भने गर्दैन । स्थानीयलाई मात्रै लिएर आंकल नगर्न हुँदैन,’ ललितपुर महानगरपालिका २२ वुङमतिका राजेन्द्र तुलाधर भन्छन्, उम्मेदवारहरुको ब्यक्तित्व प्रभाव, जनतासँगको सम्वन्ध, पनि चुनाव जितहारका फ््याक्टर बन्छन् ।
ललितपुरको जनमत हेर्दा वामपन्थी जनमत नै वढी देखिन्छ । कुनै बेला यस जिल्लालाई चीनको वेइजिङ ÷पेकिङ समेत भनेर चिनिन्थ्यो । अपवादमा कम्युनिस्टको गड कांग्रेसले खोसे पनि त्यहाँका मतदाताले वढी जसो वामपन्थीलाई नै जिताउँदै आएका थिए । तर काग्रेसका अमात्यले जिल्ला पार्टी सभापतिको रुपमा ०७० को चुनावमा ललितपुरका तिन ओटै क्षेत्रमा कांग्रेसको झण्डा गाडन सफल गराएको चर्चा चल्छ ।
राजनीतिक विरासतका दृष्टिले हेर्दा पनि ललितपुर वामैवाम किल्ला बन्ने या कांग्रेसले नै फेरि जित्ने ? २१ मंसिरको चुनावसम्म कुर्ने पर्ने भएको छ ।